ASP.NET kwi-OpenShift: Ukuqalisa kwi-ASP.NET
Kutheni kusingeniso kwi-ASP.NET kwi-OpenShift?
YENZA UMSEBENZI WAKHO
HLOLA ISIHLOKO SAKHO
UKUBHALWA KWEENKQUBO ZAKHO
Ngokwenza intuthuko ye-ASP.NET esebenzisa i-OpenShift, ndifumene ukuba izifundo ezimbalwa ngaphandle ukuqala kwi-ASP.NET
a) ingqondo engqongqo, kunye
b) ungahambi ngaphezu kweendlela ezisebenza ngayo
Xa kunjalo uzakusebenzisa i-ASP.NET kwi-OpenShift, kufuneka ube nekhono lokuyiqonda!
Kulo lungiselelo loqeqesho, ndizakuxhoma kwithuba lokukunika ukuqonda okubalulekileyo malunga nemisebenzi ye-ASP.NET kunye nento oyenzayo ngaphambi kokuba uqale ukubeka izigqibo zakho kwi-OpenShift. Siza kufikelela kwinqaku ngokukhawuleza.
Kwiindawo ze-1 kunye ne-2 yalo myalelo wokufundisa, ndiza kuhamba ngokukhawuleza ngokusebenzisa izakhiwo kwi-Visual Studio Community 2015. Oku kuthetha ukuba kuya kuba yi-Windows kule nxalenye. Kwimeko nayiphi na into, ndiya kuqhuba phezulu phezulu ukuya ngaphantsi ngenza yonke into ngaphandle kweendlela kwi-Visual Studio Code ekuthathweni emva kokusebenzisa umyalelo, oya kulungelelanisa neLuxu okanye iMac kunye nokungezelela iWindows. Ukuba ungeke usebenzise iWindows, unokuthi ulandele iindawo ze 1 kunye ne-2 ukuze ufumane ingcamango epheleleyo yendlela yokwenza umgca wokugqibela kwi-.NET Core.
Icandelo 1 - Ukusekela i-ASP inkonzo
Uya kuqala ngokukwenza inkonzo ye-ASP eyisiseko esebenzisa uMlawuli. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba ubona indlela abalawuli beControllers basebenzayo ngaphambi kokuba batyelele ngokupheleleyo kwi-MVC.
Kwi-Visual Studio (Ndisebenzisa i-Community Edition 2015) nqakraza iFayile kwaye emva koko iProjekthi entsha.
Ngaphantsi kweZimpawu -> I-Visual C # -> Umququzeli wewebhu, khetha iSicelo sewebhu se-ASP.NET (i-NET Core). Kubalulekile ukuba ukhethe i - .NET Core kwaye ayikho i .NET Framework njengaleli yelayibrari yesigaba esinqumlayo.
Faka igama lakho lomsebenzi - oku kungayinanto ongayithanda, kulo myalelo wokufundisa ndiya kubabiza ngokuba nguMeowWorld.
Njengomcimbi okwenene, le ndawo iya kuba kwi-Visual Studio Projects yomhleli, kodwa unganqikazi ukutshintsha oku kwimeko apho uya kukhangela ithuba lokugcina umsebenzi wokufundisa kwenye indawo.
Sifanele senze elinye ilungiselelo (impendulo ifana ne-ace venture ephethe imisebenzi eyahlukeneyo oya kusebenza nayo) kwaye sifuna ukubiza ilungiselelo into ethile.
Njengoko kunjalo, ilungiselelo libizwa ngokuba lifana nequmrhu lakho. Oku kulungile kakhulu, ngoko ke ushiye njengoko kunokwenzeka. Yiba nokuba kunjalo, uvumelekile ukuyiqamba kwakhona kwisiganeko ukuba uya kufumana ukukhaba kwithuba.
Qinisekisa ukuba Yakha i-Directory ihlolwe - oku akubalulekanga kwithuba lokuqonda ukuba wenza ntoni, kodwa kunoko kunceda kakhulu ukugcina izinto ezibhalwe.
Ngokufanayo unokuba ne-Visual Studio yenza isitoreji ngokuzenzekelayo. Andiyi kukwenza oko njengoko lo myalelo wokufundisa, kodwa ukwanda kwezinga, unokufuna.
Xa unelisekile kuzo zonke izicwangciso, nqakraza u-OK uhambe kwi-stride elandelayo.
Apha ufanele ukhethe ezintathu. Kulo myalelo wokufundisa, kufuneka ukhethe i-Web API yokukhetha. Ndiza kungena kwezinye iimbini kunye nezifundo ezizayo.
Ngethuba elihle lokuba uhlangane kwaye usebenze umsebenzi kulo mzuzwana, uya kuvula iwindi yeprogram (okanye ithebhu) kwaye uthabathe kwi ... / iprogram yoqwalaselo / ixabiso / - eliza kubonisa iqela le-JSON elibonisa oku:
Vala inkqubo yakho kwaye uqinisekise ukuyeka usebenze ngokucima ibhola elibomvu lokubamba (okuthi "Yeka ukuguqulwa kweengxaki" xa ungena kwi-mouse) ngenjongo yokuba ungayishintsha.
Kwisisombululo seSolution, uye kwiSolution Name -> src -> Igama leProjekthi -> Abalawuli -> IimilinganiseloController.cs kwaye uyivule.
Jonga indlela enye yeendlela ezenza ngayo i-Http ... "impawu ezinxulumene nazo (HttpGet, HttpPost, HttpPut, andHttpDelete). Le ndlela ye-http - i-HttpGet` iyasebenza kwilitye enye esisetyenziselwa ukufikelela kwikhasi lewebhu. Iingxabano zingadluliselwa kuyo yonke indlela njengemida yeenkcukacha zophando (okanye iinkcukacha zenkambo - ngaphezulu kwiindlela ezizayo).
Chofoza ngokukhawuleza kubalawuli beemvulophu uze wenze enye iklasi ebizwa ngokuba yiCatController.
Yongeza ilayibrari yeMicrosoft.AspNetCore.Mvc ukunceda ukugcina ikhowudi yakho igqibelele.
Yongeza indlela ye-Meow ehamba kwiklasi yakho:
Ngoku ugijime ikhowudi. Kwiprogram yakho, i-affix / ikati / i-bill / kwindawo yokuhlala: ##### ukubona umsebenzi wakho ebomini boqobo.
Usukela iHttpGet ("/ ikati / ibhawuntli") ukuchitha iHttpGet ("ikati / ibhajethi") kwaye utshintshe igama le ndlela ukusuka kwintambo ye-pubic "Yowl ()" ukuvula uBill ().
Qaphela ukuba akukho negama lomlawuli okanye indlela echaphazela indlela. Kuqhelekileyo ukwenza ukuba yonke into ihambelane noko kunjalo, hlaziya kwakhona ikhowudi:
Ngoku ngoku siquka enye ikati!
Ngoku unako ukuqhuba ikhowudi kwaye uvule inkqubo yakho: ... / ikati / i-steve /
Siyakwazi ukuqhubeka nokubandakanya amakati, kodwa ukwenza indlela yokuba wonke umntu abe nokucaphuka ngokucacileyo, ngoko kuthiwa sitshintsha njani loo nto. Singawasebenzisa ukuxabana kwegama lekati eliza kudluliselwa njengomgca wombuzo. Ngoko ikho ikho yethu inokufana nale:
Ngoku sebenzisa ikhowudi kwaye uqondise isiphequluli sakho ukuba: ... / ikati? ikati = ibhilidi ke ngoku ... / ikati? ikati = i-steve
Ngoku sineentaka ngendlela efanayo, nangona i-URL idibene. Le yindawo ehamba ngayo ngokusebenzisa iindlela eziya kuyo. Konke okufunekayo kuyitshintsho encinane kwikhowudi:
Ukongezelela, ngoku sinokumelana nokusebenzisa: ... / ikati / ibhayili kunye ... / ikati / steve.
Yiloo nto kwinxalenye yokuqala yale ntetho. Ukwenza ezi zimbini iindlela kunye neento ezithethayo, uqalise ukwenza inkonzo ye-ASP.NET yewebhu kunye neefowuni ezimbini ze-API! Iposi elilandelayo liza kuxubusha ukufumana nokubeka idatha, nokuba iiseshoni zisebenza njani, njengoko sikhula ikati.
Yiba yi-Red Hat Iinjineli eziqinisekisiweyo | RHCE Certification
Isiqinisekiso seRHCE - Indlela yokuba yi-Red Hat eneNjineli eqinisekisiweyo